Hopin: A Virtual Venue Iji Drivebanye Njikọ Gị Online Ihe | Martech Zone
Mgbe mkpọchi mere ka ihe omume bụrụ nke mebere, ọ mekwara ka nnabata ihe omume ịntanetị mee ngwa ngwa. Nke a dị mkpa ka ụlọ ọrụ mata. Ọ bụ ezie na ihe omume mmadụ ga - alaghachi dị ka ọwa ahịa na azụmaahịa dị egwu maka ụlọ ọrụ, ọ ga - abụkwa na mmemme ihe omume ga - anọgide na - anabata ma bụrụkwa ọwa dị mkpa.
Ọ bụ ezie na usoro nzukọ nzukọ a na-ahụkarị na-enye ngwa ọrụ enwere ike itinye n'ọrụ iji nwee otu nzukọ ma ọ bụ webinars, ngwaọrụ ndị ahụ adịghị erute ịnye usoro ikpo okwu zuru oke nke gụnyere atụmatụ niile nke ogbako emere. Ezigbo enyi m Jack Klemeyer Kekọrịta otu ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ ọzụzụ ya na-eji na-agbanwe agbanwe site na nzukọ ọgbakọ kwa afọ na nke mebere to Hopin.
Hopin: Ebe Virtual Maka Ihe Omume Gị niile
Hopin bụ ebe a na-ahụ maka ebe nwere ọtụtụ mmekọrịta mmekọrịta nke kachasị nke ọma maka ijikọ na itinye aka. Ndị bịaranụ nwere ike ịbupu ma pụọ ​​n'ime ụlọ dị ka mmemme mmadụ na-eme ma nwee obi ụtọ ọdịnaya na njikọ ị meere ha.
Ezubere Hopin ka o mepụtaghachi ahụmịhe nke mmadụ na-eme, naanị na-enweghị mgbochi nke njem, ebe, ihu igwe, na-awagharị awagharị, na-adọba ụgbọala, wdg. Na Hopin, azụmaahịa, obodo na otu dị iche iche nwere ike iru ndị na-ege ha ntị n'ụwa niile, zukọta n'otu ebe, ma mee nnukwu mmemme n'ịntanetị ka ha pere mpe.
Atụmatụ Hopin gụnyere
Oge Ihe Omume - gini na - eme, mgbe, na akụkụ a ga - eso.
Nkwado - a na peeji nke nnabata ma ọ bụ ọnụ ụlọ nke ihe omume gị. Lee ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ihe na-eme na mmemme ahụ ugbu a.
ogbo - ihe ruru ndị bịara 100,000 nwere ike ịga mmemme gị ma ọ bụ isi okwu gị. Gosiputa ndu, kpoo ọdịnaya edere edere, ma ọ bụ iyi site na RTMP.
sessions - ihe ruru ndị bịara 20 nwere ike ịnọ n’otu ihuenyo ya na narị kwuru narị ndị bịara ya na-akparịta ụka ma na-akparịta ụka n’abalị a na-akparaghị ókè nwere ike ịgba n’otu oge. Zuru oke maka okpokoro okirikiri, ọrụ, ma ọ bụ mkparịta ụka otu.
Ndepụta Okwu - kwalite onye na-ekwu okwu na mmemme ahụ.
ụka n'Ịntanet - ike nzukọ otu na-akpaghị aka iji mee ka ndị bịara abụọ, ndị ọkà okwu, ma ọ bụ ndị na-ere ahịa nwee oku vidiyo.
ikori - mmemme nkata, nkata ogbo, mkparịta ụka oge, nkata ụlọ ụka, mkparịta ụka nzukọ, mkparịta ụka azụ na ozi na-agbakọ agbakọ. Enwere ike ịkụnye ozi sitere na ndị na-ahazi ma gosipụta ya maka njirimara dị mfe site na ndị bịara.
Lọ ntu ndị na-egosi ihe ngosi - mejuputa ụlọ nkwado na ụlọ ọrụ ibe onye na-ere ahịa ebe ndị na-eme ihe omume nwere ike jegharia ileta ụlọ ndozi ha nwere mmasị, soro ndị na-ere ahịa na-emekọrịta ihe, ma mee ihe. Bolọ ntu ọ bụla na ihe omume gị nwere ike ịnwe vidiyo dị ndụ, ọdịnaya akara, njikọ Twitter, vidiyo ndị edere edere, onyinye pụrụ iche, ndị na-ere ahịa na igwefoto dị ndụ, na bọtịnụ ahaziri ahazi CTA.
Nkwado logos - clickable logos na-eme ka ndị ọbịa bịa na ndị na-akwado gị 'weebụsaịtị.
Ahịa tiketi - ntinye tiketi na nhazi ịkwụ ụgwọ ya na akaụntụ ahịa Stripe.
Short URLs - nye ndị bịara otu pịa ịbata n’ime akụkụ ọ bụla nke mmemme na Hopin.
Hopin bụ usoro ihe omume niile emere maka ijikọ ndị na-ekwu okwu gị, ndị nkwado na ndị bịara ya. Ndị na-ahazi nwere ike nweta otu ebumnuche nke mmemme ha na-anọghị n'ịntanetị site na ịhazi ihe omume Hopin ha iji kwado ihe ndị achọrọ, ma ọ bụ ihe omume 50 na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ, nzukọ mmadụ 500 niile, ma ọ bụ nzukọ 50,000 kwa afọ.
Nweta ngosipụta Hopin
Tags: omume nkataụlọ ngosi ihe ngosihopinnzukọ n'ịntanetịihe ntanetịndepụta okwustraiputiketi tiketioku vidiyomebere ngosi
CSV Explorer: Na-arụ ọrụ na nnukwu faịlụ CSV